We.com.mm - သင့်ကို ဈေးဗန်းခင်းနေမှန်း သတိထားရမယ့်အချက် ၅ ချက်
ချစ်သူ မရှိကြတဲ့ Single လေးတွေ ဒီခေတ်မှာ အပြိုင်အဆိုင် ဈေးဗန်းခင်းကြပေမဲ့ ကိုယ့်ကို ဈေးဗန်းလာခင်းနေတာတောင် သတိမထားမိပဲ ဖြစ်နေကြတာတွေ ရှိမှာပါ။ ကဲ .. ဒီလို သတိမထားမိကြသူလေးတွေအတွက် ဘယ်လိုအချက်လေးတွေက သင့်ကို သဘောကျတဲ့သူမှန်း သိစေနိုင်မလဲ?
၁. သင့်ကို အမြဲ စနောက်မယ်
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင်ပျော်ရွင်အောင် သင်စိတ်တိုသွားအောင် စမယ် နောက်မယ် ..။ သင်ရယ်အောင် ဟာသလေးတွေပြောမယ်။ အဓိက က သင်ကို သတိထားမိအောင် ပထမဆုံး ဈေးဗန်းခင်းတဲ့ အချက်လေး ပေါ့။
၂. သင့်ကို သူ့အကြောင်းတွေ ပြောပြမယ်
ဒီအချက်ကတော့ သူ့ရဲ့ တချို့အကြောင်းတွေကို တစ်ခြား တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှ ရင်မဖွင့် ပဲ သင့်ပဲ လာရင်ဖွင့်တယ် တာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် သူကို ဘယ်သူမှသဘောမကျကြတဲ့ အကြောင်း နဲ့ သူ ချစ်တဲ့ သူတိုင်းက သူ့ကို ငြင်းခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ ။ဒါလည်း မသိမသာ သင့်ကို ဈေးဗန်းခင်းနေတာပါပဲ။
၃.သင့်ဆီက attention ယူမယ်
သင်နဲ့ ပက်သတ်တဲ့ အကြောင်းရာတွေကို သူက သတိထားမိနေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် သင် ဘာလုပ်တတ်တယ် သင်ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာကို သူကသိနေမယ် သူ့ဘက်ကနေ စကားတွေ အရင်လာပြောမယ် post တွေ..Myday တင်ရင် အမြဲဝင်ကြည့်မယ် ဒါဆိုရင်တော့ ရိပ်မိလိုက်တော့
သင့် စိတ်ညစ်နေရင် အမြဲ အားပေးစကားပြောမယ်။ သင်အတွက် သူက သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လို နှစ်သိမ့်ပေးရင်တော့ သင် နဲ့ သူ့ကြားမှာ ပိုမို နွေးထွေးပြီး ကြည်နူးစေမယ့် ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ရချင်လို့ပါပဲ။
၅. သင့်အနားမှာ အမြဲ ရှိနေမယ်
ကျောင်းအတူ သွား တာ ပြန်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်နဲ့ အတူ အမြဲ နီးနီးကပ်ကပ် ရှိပေးတဲ့ သူဆိုရင်တော့ သေချာနေပါပြီ သူ သင့်အနားအမြဲ ရှိချင်လို့ပါပဲ။
သင့်အနားမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို မသိမသာလေး ဒီလို အချက်လေးတွေ ပြုမူနေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် သူသင့်ကို သဘောကျနေတာ ပါ။ ရှောင်ကောကော တွေပဲ စိတ်မဝင်စားနေနဲ့ ဈေးဗန်းခင်းတာ အနားဘယ်သူရှိလဲ သတိရော ထားမိကြလား။
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ ချစ်သူ ကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခါ
ချစ်သူများနေ့ကို သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ အဖော်ခေါ်ရင် ရရှိလာတဲ့ အကျိုး (၅) ချက်